''Bu’aa Bayii Qabsoo uummata Oromoo Siirna garbuamaa irraa gara Bilisummaatti'’ irrati yaadi ummata mal fakata?
Wayee Kitaaba Bu’aa Ba’ii qabsoo uumata Oromoo garbumma irra gara bilisumati ani bareese irrati yaada biyya Email na ga’ee keessa murasa Gulala Kitaaba kana Beekan Gulummaa irranaa fi Abdi Fite Qoophessa Sonaya OMN ergera sababin isaa wayee OMN namooti caqasan waan jiranf. Dhammis kan Email koo cufame ture burqaa1961@gmail.com irran argadhe
Keesummati natei fi Bona Kitaabi kun kara ONM utuu Qileensa irra olee Qeeroo ijoolee Oromoo kitaaba kana hin argatiif ni gargara jeedhan. Dargagoon Oromoof Kitaaba kun akka Tarsimoo fi Toftati gargara jira jeedhan. Keesummati Kutan 3faan waan ama biyya keessati adeema jiruf sabi Oromoo waan goochuu qabu akkuma jiruti waan qabuuf dhimma kan Beekan Gulumma irranaa fi Abdi Fite birra nu ga’ii wari jeedhan FB irra na gaafatan ilee heedu dha. Nekemte irra amoo Kitaaba kan Font isaa heedu xiiqeesine gara fula 500ti gadi qeeroof irra deebi gatii xiiqan utuu maxanfamee garii dha wari jeedhan ilee jiru.
Waarii caalisan Galata nagalateefatan hamiilee koo jajabesan fi jalala naaf qaban qoofa ibsatan ilee jiru. Hunda Caalaa waan na gootan wal gurmeesa, of irrati hirkadha diina irra fudha ittin diina lola ni danda’ama, Qabeenyi Ethiopia keessa jiru hundi kan Oromooti Cubuu hin qabuu keessan Kitabicha jira waan hin dubsiif hubachisa.
Amas Dargagota fi Baratoota Qeerroo ijoole Oromoo Tarsimoo fi Tofta adda addan Qabsoo gargaruu barsisuuf, Oromummaa fi Sabonumaa beekumasa irrati hunda’een Bilisummaa Oromoo fi Walbummaan Oromiyaa akka mirkana’uu lamafa siirna habasha toritoran qabsoo qeerro akka takkalee hin kufifnee, Dogogra kana dura yeero 6 ol dalgamee barana ilee utuu hin dogogorin Oromoo abba biyyaa qoochuuf qeerroo Ogana cimma uumate qabsoo akka bakkan ga’uu diasporan Ethiopiyuma jala adeemu akka qeerro hin gufachifne barsusan jira, ani kayyoon fi feedhin koo tokkiti dha Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa akka mirkana’uuf waanin danda’e gumachu dha.
Yaada uumata irra na ergame
Beekan Gulummaa Irranaa yaada irrat akkasi jeedha.
Hayyuu keenyaa Dr. Geetachoo Jigii Dammaksaaf,
Hojiin kitaaba kana kan ajaa'ibaa akka ture beekamaadha. Keessumattuu qabsoo amma deemamaa jiru kanaaf ka'umsa gaarii kan taasise kitaaba gita hinqabnedha. Utuu Miidiyaalee Oromoofan dalaga jedhurratti guutummaansaa dubbifameellee gaariidha. Kitaabichi fuula 500 tti xiqqeessuu kan jedhu kun suuta ta'uu qaba. Font'saa kana caalaa gadi cabsuun tarii gaariidha laataa? isas haa ilaallu. Kitaabichi akka seeraafi heera saba Oromoottii kan mana Oromoo mara galuu qabudha. Waliigalteen beelkamaan mallattoo barbaadu tokko ta'uu qaba..maxxansiisun kana booda ittiin taphachuu..gatii dhabsiisuu utuu hintaane, kan maallaqa Oromoofi Barreessichas gargaaru ta'uu qaba. Baldhinaan irratti katabuu dandeenya. Kitaaba Yunivarsiitiifi manneen barnootaa Oromiyaa mara keessa seenuu qabudha. Kanaafis koree alaafi keessaa waliin hojjetu dhaabbachuu qaba!!
Duraan dursee galanni kee bilisummaa haa taatu, qalamni kee dabalee
haa mirgisu! Seenaa dhokatee hafe akka kanatti ifa basuu keef
galatoomi "Dhugaan qallattuyyu hin cittu" habashooni jarra 1oliif akka
barbaadani maqaa keenya xureessanis atti ifa bastee barreessuu keef
galata guddaa qabda. Kitaabi keessan Tofta fi saganta qabsoon itti deemuu qabduu dargagoota keenyaf kara banane jira waan goochuu qabnu baranera.
Kitabicha arganne dubbisuf bakka itti argannu osoo nu beeksistee baay'ee natti tola bakka itti argamu naf barreessi.
Galatoomi!! Umurii kee sif ha dheeressu bilisumman ni argamti jabadha!
Harka fuune kabajamoo d/r Getachew Jigii Dammaqisaa ALBUUDA OROMIYAA baga nuuf jiraattan, jabaadha nuuf jajjabaadha,lubbuu dheertuu nuuf bulaa,olmaa bultii keessan rabbi isin haa tiksu,halkanifi guyyaa yaadaa qalbiin isin faana jirra isinis nuuf jabaadha kitaaba keessan dubbise baayee natti tolee jira ammas kana caalaa nuuf jabaadha waan kana caalu nama hojjatu nama barreessu rabbi isin haa taasisu.
Nagaa jirtuu Dr. Geetaachoo? Alaa manni sa'aa namni?
Kitaaba keessan argadheen jira Bu'aa ba'ii ... kan jedhu san. Egeree dhufuuf akka itti yaadnu no godha. Walitti deebina,
Nagaa Waaqaa Wajjin!
Dinne feb 21, 2016
Kabajamaa fi jaalatamaa akkasumas Barressaa hayyuu oromoo akkam jirtu.
nagaa kootti . Kitaaba keessan kan "bu'aa bahii qabsoo Oromoo"jetty baayyee kan
qalbii nama fuutu waan taateef gumaachi keessaan danuu na boonse..
Yoomiif July 8, 2016
Dr.Geetachoo, akkam jirtu? Maatiin waatiin hunduu nagaadha?? Akkam biyyi hanbaa kuu? Nagaan haa dursu! Kitaaba keessan argadheera. Hedduu namatti tola. Jabaadhaa!
Yeroon gara yaada kootti galu ani Taarikuun jedhama garuu sababa email hin qabneef kan obboleettii kootti fayyadamee dhaamsa koo dabarfachuu barbaade. Ani kitaaba isin "BU'AA BA'II QABSOO UUMMATA OROMOO, CAAMSAA 2014" barreessitan dubbiseen ture. Achirratti kan jedhu HOOGGANAA oromoof dhaabna jedha kun yoomii? Hanga yoomiittis .... ..... .... Baay'een gadda oromoon har'as hoogganaa dhabne maaloo waa nuun jedha. Horaa bulaa. Taarikuu wallagga irraa
demitu Mar. 30, 2016.
DR Geetachoo Jigii tiif kitaabaa bu’aa ba’ii qabsoo ummaataa Oroomoo
jedhuu irraa wantaa baayee baraadhera .kunis akkaa Oroomoon irribaa
keessaa damaquuf iddoo guddaa qabaa. keessummaa inni fuulaa 540, 650 fi
673 baayee namaa gaddisisaa.kanaaf lubbuu naf dheerradhuu. GALAATOMAAA !!!
Gbeeekeeeta Fbe 6, 2016
Dr nagaan Waaqayyoo isiinif haa baayyattu. akkam jirtu? Dr kitaaba
keessan kan "BU'AA BA'II QABSOO UUMMATA OROMOO" jedhu dubbiseen heeddu
itti gammadee miraa kiyya baayyee na kakasee, qalamni keessan haa
mirgisuu. Dr haala amma Oromiyaa keessa jiruu qubaa qabduu uumatni
hundi kitaba keessan argatee dubbisee sila tofta loola fi bu'uralee
bilisummaf kara tahan hedduu irraa baru dandaha turee, garuu kitabicha
namni qabatee argamee akka adabamuu qubaa hin qabatiin hin haftan,
kanafuu kitaaba kana uummata biraan geesisuuf maal yaadan? akkasumas
immo gorsii keessan kara midiyaa OMN's tahee karaa biraa barata harka
duwaa afaan qawee fulduraa dhabacha jiruuf murteessa wan tahef kana
irratti maal yaadan? ani barataa PhD university finfinnedha garuu
wantaan godhuu, naman qunamuu dhabee caaliseen ta'ee jiraa maal akkan
gochuu qabuu adara karara na busaa. Ulfadha Dr umurii dheraa fi fayya
gutuun isinif hawwa.
Na, dce, 15, 2015
Akkam jirtu jaalatamoofi kabajamoo haayyuu keenya Dr.Geetachoo naga keessani bayyeen isin jaalladhan ture ammas akka carra ta'e kitaaba keessan Bo'a bai qabsoo ummata oromo jedhu dubbisuuf jalqabee ergaan xummuru jalan ga'ee dandeettifi ogumma ganama human isin badhaase kana aja'ibsiifadhen jallaallifi kabajni ani isiniif qabu umnakoon olta'e nutti sichiiti beektootafi hayyoota akkati osoo qabnuu diinni nunweerartuu akka lammiin keenya hunduu ofbeeke enyummaasan jiraatu taasisa turtan gochaas jirtu galatni anifi hiriyyoonniko Ambo university awaroo kamphasii keessa jiruu isiniif qabnu Adda.
Akkam jirtu Dr.maatiin waatin jireenyi biyya amba akkam?Ani nagaadha, kitaaba keessan Wa'ee "Bu'aa Ba'ii Qabsoo Uummata Oromoo" baayyee baayyee jaalladhera, jabaadhaa, lubbuu dheeradha. Wallaggaa, Manasibuu irraa
Dr, Geetachoo Jigi Dammaqsaaf.
Bu'aa ba'ii qabsoo uummata Oromoo keessaatti dabarsiitani fi dabarsaa
jirtan bu'aa isaa fi firrii isaa lafa nuuf keessaani dubbiisen barumsa
hedduun irraa argadhee galannii keessaan bilisummaa saba keessaani haa
ta'u fi nuuf haa ta'un dhamsa koo dabarfachuu barbaada jabadhan jedha.
Kitaaba kana dubbiise xumuruuf galgaala galgaalaa sa'aa 2:00-6:30pm dubbiisen guyyaa 36 xumuure.
Re: D/r Geetaachew jigii Dammaqsaa nuti ummati oromoo biyya keessa jirru baayyee isin jaalannaa, guddaa isin kabajna.D/r ummati Oromoo biyya keessa jiru qabsoo isin jalqbaa kaastanii hanga xumuraatti gootaniifi gochaa jirtan hundi wanta ummata keenya kakaaseefi onnachiisee Abdii itti hore waan ta'eef ummati oromoo hundi dargaggooni qabsootti akka galuu haal duree hunda xumuree waan jiruufi galati isin biraa qabdan kan tilmaamamu miti, kanaafi isin nuyi dargaggoota oromoo biratti iddoo isin qabdan bakka guddaadha.Ani akka dhunfaa kootti iddoon isiniif qabu GAD JALA KANA TAA'EEN GUBBAA SANA ISINIIF KENNA.ulfadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u.nuti dargaggoon oromoo yaadaanis ta'e wanta hundumaan isin cinaa hiriirree hojjechuufi hawwiifi Abdii guddaa qabna.waa'ee kitaaba keessanii Kanas utuun hin galateeffatiin bira darbuu hin barbaadu.kitabi kuni keessumattuu dargaggoo oromoo seenaa guddaafi wanta jira jedhee yaadamaa hin turreefi icitii hunda nu barsiisee akka dargaggoon karaa h
Ph.D Geetachoo Jigii Dammaqsaa...
Baay'een isin galateeffachuu barbaada!!!!
waan baay'ee kanan dura kanan hin beekin har'a gahee,kitaabicharran
argadhee.Baay'ee galatoomaa jechuun barbaada!!
kobbeen keessan ammayyuu haa mirgisu.
Dagaagoo Oromiyaa baldhoo G/ke/wall..Mag HarooSabbuu irraa
degoo yigazu 8/10/15
Akkam jirta? Maaloo Iji hamaan si hin argiin!
Kitaabake Bu’aa Ba’ii Qabsoo uummata oromoo jedhu akka carraa
argadheen bitachuun dubbiseera. Dhuguma fedhan waa’ee oromoo baruuf
barbaadu dheebuu nabaaseera. Hiriyyoonniko baayyeen kitaaba sana
bitachuuf barbaadanii waan dhabaniifi guyyaan waliifi qooduudhaan wal
harkaa fuudhanii dubbisaa jiru. Haata’u malee walga’uu hin dandeenye.
Kanaafuu yoo yeroo qabaatte waan sadiin si kadhachuu barbaada
1. Kitaabicha gabaabaatti barreessuudhaan (fuula 100 kan hin caalle)
utuu soft copy/ hard copy arganne dargaggoonni biyya keessaa ittiin
wal barsiisuu fi uummata hubachiisuu danda’u
2. Miidiyaa OMN irratti qilleensi utuu siif kennamee seenaa kana
uummata ballaa barsiifte namni ufi hin beeknee kan ofdagatellee
dammaquu danda’a jedheen yaada
3. Kana lamaan irratti dabala akkaataa kitaabni kuni uummata oromoo
bira ga’uu danda’u ykn eessatti akka argachuu dandeenyu utuu nuuf
ibsite. Nutis ga’ee keenya GDHWBO ni baana jedheen amana. Madhee shaniin wal ijaaruu eegalleerra. Uummatas dadammaqsaa jirra. Jaarmiyaa/dhaaba oromoo waraanaan diina falmatu akka jajjabeessaü
jirtan nan amana oromoon biyya keessaas hedduun qophiidha.
Nutillee maal gochuu akka qabnu ‘e-mail’ kanaanis ta’e ‘website’
mataakeen nugorsi .Jarri e- mail ke kana hordofuu danda’u jedheen waanan yaaduuf ani
ammaaf uf ibsuu hin barbaadne sababiinsaayyu waatokkollee utuu
hinbuusiin wayyaanneen akka hojii ala na hin gooneef jecha.Bu’aa
buusuun barbaada. Gaaf tokko garuu ……..
Ati dhugumaan qabeenyaa fi abdii uummata Oromooti.
Nageenyi badhaadha? Jiruun biyya ormaa akkam isinitti jira?
Kitaaba kee dubbiseen ture, haalan namatti tola, qalamni kee haa mirgisu jechaa dhugaa uummata keenyaafi shira irratti hojjetamaa jiru hagana keessa gadi seentee dhalootaaf bu'uura lafa kaa'uun waan salphaa miti. Osoo akka barbaadde nyaattee dhugdee bashannanuu dandeessuu miidhaa sabaa taa'ee ilaaluurra jettee maatii fi biyyakee buuftee lubbuu oolfachuuf biyyaa bahuun booree bahuuf fakkaata. Mee hayyuun akka keessanii kun wal gahee fala nuuf falee daandii sirriirra akka nu buusu ni feena. Qalbii guutuudhaan nama nu qajeelchu eegaa jirra, garuu hanga yoomiitti? Mee nuti dhaloonni ammaa(Qube generation) maaltu nuuf falaa? Wixinee maaltu nuuf wixinamuu qabaa, moo nutu wixinachuu qabaa?
Quunnamtiin keenya akka cimu abdiin qaba!
Har'aaf asumarratti haa na gahu.
Jaalatamoo fi kabajamoo Dr.Getaachow kitaabni keessan Bu'aa ba'ii qabsoo uummata Oromoo jedhu daawwiti fi riqicha ce'uumsa dhaloota ammaati. Galatoomaa jechaa maxxansa itti aanuuf osoo GABAATEE wwan achi keessa jiran hiikamanii gaaridhan jedha hundi wal qixa hin hubatuutii. Jabaadhaa, ammas waa isinirraa eegna.
Akkam jirtu,Dr? nagaa keessanii? nuti akka ta'etti har'a geenyeerra.
kitaaba bu'aa ba'ii qabsoo Oromoo dubbisee ittis quufeera. galatoomaa
dirqama seenaan gaafatu ba'uu keessaniif. Anis daandii barreessaa kana
qabadheen jira. Nu jajjabeessaa. Amma maal hojjechaa jirtu?(barsiisaa
fi barreessaa jalqabaa
Kabajaan sif qabuu bayee gudadhaa jabadhaa akkasuuma itti nuu fufaa isin jalanaa .
Kitaaba keesan Qeerron akka Tarsimoo fi Toftati itti fayadama jira Hayyuu seenaa oromoo akkam jirtuu nagiyaa? Akkam jirtuu? nagaadha! Baayee sin jaalannaa hayyoota oromoo hundumaa kedssan siin dhagenya, tooftaa qabsoo keessatti angafa! seenaa kitaaba keessan keessafi sednaa hindii irraa waan jabduu barannaa dhugaa keessanii kana dur gabbifachaa dhufne!. Qara Qaraan Qaruu heloo doktor. nagaa keessanii? ani oromoota sin dinqisiifatan keessaa Isa tokko yoon tahu kitaaba isin barreessitan San barbaadee bitadhee ergan dubbisee waggaa 1 fixeera. kitaaba seenaa fi qabsoo egeree oromoo irratti xiinxalaa fi tarsiimoo isin lafa keessan waan addaati.kanaaf beekaa akka keessanii qabaachuun baayee nu boonsa. rabbi umurii dheeraa isinii haa kennu!
Dhugumaa hayyuudha isiiniin! Dhugaa dubbatamuu qabduu nattii dubbatanii! Nutii qeerroon oromoo anii qeerroon oromoo qaabsoon biyyaa keessa jiraachuu dhiigafi wareegamaa keenyan bilisummaan dhufuu qofattii amannaa! Rakkoo dhaabaa rakkoo namaatti qabamnee kayyoo keenya qulqullurraa duuba hin jennuu.Rakkoo sabaa keenya qofa ilaalletuu of fuulduraatti deemna! Ijaaramuu jabadhaa nun jedha malee sichi miti duraa xumurannee! jabaadhaa nu jabeessaa! nutii dhiiga mitii lubbuu keenyad oromiyaaf wareeguuf qophiidha yoos malee bilisummaa tolatti hin argannuu! Nutii ammaa lafa jiruttii ijaaramnee jirraa. Waan gochuu qabnuu hayyoota keenya biyyaa keessaaf alaan mariyanne goona! Nu jabeesaa!
Ammaa bilisummaattii dhiyaanneeraa!
Kitaabni kuni baay'ee nama humneesa ani akka nama tokkotii kitaba kanaa bitee dubisee jira,namooni heduus akka bitaatan tasiiseraa galanii bilisumaadha,haa ta'uu malee dhamsii koo kan anii hayootaa oromootiifqabuu yeroo diinii keenyaa nuratti tokkomuu nuutii akkamii tokkomuu dadhabnaa? tokkumaa irraatti siirritti hojachuu qabduu jabadhaa nutis isiin biraa jiraa jabadhaa
''Bu’aa Bayii Qabsoo uummata Oromoo Siirna garbuamaa irraa gara Bilisummaatti'’